घट्दैछ नेपालमा कोरोना संक्रमण? :: विवेक राई :: Setopati
घट्दैछ नेपालमा कोरोना संक्रमण? काठमाडौंको संख्या थाहा भएपछि मात्र यकिनसाथ भन्न सकिने
विवेक राई काठमाडौं, असार २४
पछिल्ला केही दिनदेखि नेपालमा दैनिक कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको पछिल्लो पाँच दिनको तथ्यांक हेर्ने हो भने पिसिआर परीक्षण गर्दा संक्रमण पुष्टि हुनेको दर १६.५ बाट ३.३ प्रतिशतमा झरेको छ।
असार १९ गते शुक्रबार एकैदिन ७ सय ४० जना संक्रमित देखिएका थिए। त्यो दिन ४ हजार ४ सय ८३ जनाको पिसिआर परीक्षण गरिएको थियो।
त्यसपछिका दिनमा संक्रमणको दर लगातार घटेको छ।
शनिबार ४ हजार ५० जनाको परीक्षण गर्दा २ सय ३२ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो। त्यसपछि आइतबार संक्रमित संख्या फेरि थोरै उकालो लाग्यो। उक्त दिन ४ हजार ७ सय १० जनाको परीक्षण गरिएकोमा २ सय ९३ जनामा संक्रमण पुष्टि भयो।
सोमबार ४ हजार ७ सय जनाको परीक्षण गरिएकोमा १ सय ८० जनामामात्र संक्रमण देखियो। मंगलबार भने ६ हजार १ सय ३३ जनाको परीक्षण गर्दा २ सय ४ जना संक्रमित थपिए।
यसरी पछिल्ला पाँच दिनको तथ्यांक हेर्ने हो भने संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ। यद्यपी नेपालमा कोरोना संक्रमण घट्दै गएको छ भन्ने निष्कर्षमा पुगिहाल्न पाँच दिनको आँकडा नै पर्याप्त भने होइन।
बुधबार बिहानसम्मको तथ्यांकअनुसार नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १६ हजार १ सय ६८ छ। जसमा 'एक्टिभ केस' ८ हजार ६ सय ३४ जना छन्। ३५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ७ हजार ४ सय ९९ जना डिस्चार्ज भएका छन्। संक्रमित मध्ये ४६ प्रतिशत संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्।
क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिहरूको संख्या पनि ह्वात्तै घटेको छ। अहिले २५ हजार ७ सय २७ जना क्वारेन्टिनमा छन्। जब कि असार १ गते १ लाख ३३ हजार ८ सय २९ जना क्वारेन्टिनमा थिए। एक महिना नबित्दै एक लाख बढी मानिसलाई क्वारेन्टिनबाट घर पठाइएको छ।
क्वारेन्टिनबाट एक लाख बढी मानिसलाई घर पठाइए पनि उनीहरू सबैको परीक्षण भने गरिएको छैन। तीमध्ये कतिलाई परीक्षण गरियो भन्ने विवरण सरकारसँगै छैन।
त्यसबेला परीक्षणको चाप धान्न नसकेपछि सरकार आफैंले परीक्षण नै खुम्चिने गरी 'कोभिड-१९ टेस्टिङ' सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। निर्देशिकाले क्वारेन्टिनमा भएका व्यक्तिमा लक्षण देखिएमात्र पिसिआर परीक्षण गर्न भनेको थियो। जसले गर्दा भारतजस्तो संक्रमण धेरै नै फैलिएको ठाउँबाट आएकाहरू पनि परीक्षण हुनबाट छुटे।
क्वारेन्टिनबाट परीक्षणबिना घर पुगेका कतिलाई फेरि संक्रमण देखियो।
अहिले भने जम्मा २५ हजार मानिस क्वारेन्टिनमा छन्। भारतबाट आउने मानिसको संख्या पनि निकै कम छ। गत जेठमा दैनिक ४ हजार मानिस भारतबाट आउने गरेका थिए। अहिले भने फाट्टफुट्टमात्र भारतबाट आइरहेका छन्।
अहिले तेस्रो मुलुकबाट आउने मानिसको संख्या भने बढेको छ। सरकारले तेस्रो मुलुकमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई उद्दार गरेर स्वदेश ल्याउने भनेसँगै ती ठाउँबाट आउने मानिसको संख्या बढेको हो। अहिलेसम्म १७ हजार मानिसलाई तेस्रो मुलुकबाट स्वदेश ल्याइएको छ।
इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार तेस्रो मुलुकबाट आउने व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण बढी देखिएको जनाएको छ। त्यसरी नेपाल आउनेलाई अनिवार्य पिसिआर रिपोर्ट ल्याउन भनिए पनि ३५ प्रतिशतले मात्र रिपोर्ट ल्याएको महाशाखाको भनाइ छ।
क्वारेन्टिनमा बस्ने व्यक्तिको संख्या पनि घटेको र भारतबाट आउने संख्या पनि कम रहेकाले संक्रमितको संख्या घट्दै गएको देखिन्छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले भारतबाट आउने मानिसहरू कम भएको र क्वारेन्टिनमा बस्ने मानिसहरू घट्दै गएकाले नयाँ संक्रमितहरू थपिने क्रम कम भएको बताए।
तर काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भनेर थाहा भएपछि मात्र संक्रमण कति बढ्यो वा घट्यो भन्ने थाहा हुने उनले बताए।
काठमाडौंजस्तो ठाउँमा 'लोकल ट्रान्समिसन' फैलिँदै गएकाले संक्रमित संख्या थप बढ्ने जोखिम देखिन्छ। उपत्यकामा अहिलेसम्म २ सय ६७ जनमा संक्रमण देखिएको छ। यी संक्रमितहरू उपत्यकाका २३ स्थानका छन्।
उपत्यकामा संक्रमण समुदायमा गएको/नगएको भनेर यकिन गर्न अहिले १० वटा ठाउँका मानिसहरूको परीक्षण सुरू गरिएको छ। जसमा तिनकुने, कोटेश्वर र नख्खु क्षेत्रका २ सय बढी मानिसको परीक्षणमा गरिएकोमा कसैमा पनि संक्रमण देखिएको छैन।
उपत्यकामा कतै नगएका व्यक्तिहरूमा पनि संक्रमण देखिन थालेपछि सरकारले संक्रमणको अवस्था थाहा पाउन ठाउँठाउँमा परीक्षण गरिरहेको छ। ती ठाउँबाट आएको नतिजाले कस्तो रणनीति तय गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने महाशाखाले जनाएको छ।
महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डेले काठमाडौंमा ठूलो जनघनत्व रहेकाले यहाँ विशेष ध्यान दिइएको जनाए।
प्रवक्ता गौतमले काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमणको अवस्था एकिन गर्न विभिन्न १० ठाउँबाट १५ सय जनाको परीक्षण गरिने जनाए।
'हामीले उपत्यकामा समुदायमा संक्रमण पुगेको छ वा छैन भनेर १५ सय बढी मानिसको परीक्षण गर्दैछौं। त्यसको नतिजा आएपछि कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने कुरो टुंगो लाग्छ,' उनले भने।
त्यहाँबाट नतिजा राम्रो आए पनि फेरि 'फोकस ग्रुप' अर्थात निश्चित समूहहरूलाई छुट्याएर परीक्षण गरिने उनले जनाए। त्यस्ता समूहहरूमा चिकित्सक, नर्स र विदेशबाट आएकाको परिवार रहेको गौतमले जनाए।
'यी सबै परीक्षण पहिले उपत्यकामा सुरू गर्छौं र छिट्टै अन्य ठाउँहरूमा पनि सुरू गर्छौं,' उनले भने।
प्रवक्ता गौतमले नै साउनको अन्तिमसम्म उपत्यकामा ५ हजार संक्रमित पुग्नसक्ने जनाएका छन्। यसअघि पनि मन्त्रालयले साउनसम्म देशभर ४० हजार संक्रमित पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।
'केही फर्मुलाअनुसार हामीले संक्रमित संख्या प्रक्षेपण गरेका हौं तर त्यति नै पुग्छ भन्ने पनि छैन,' प्रवक्ता गौतमले भने, 'संक्रमणको नियन्त्रण सरकारले मात्र गर्न सक्दैन। यसमा नागरिकले पनि नियम पालना गर्नुपर्छ।'
उनले संक्रमणबाट बच्च अनिवार्य मास्कको प्रयोग, साबुन पानीले हात धुने र भौतिक दूरी कायम गर्नु रहेको जनाए।
प्रकाशित मिति: बुधबार, असार २४, २०७७, १४:३४:००
कान्तिपुरका वरिष्ठ पत्रकार बानियाँको मृत्युबारे छानबिन गर्न प्रेस युनियनको माग